Doodda ka dhanka ah Taariikhda iyo soo gelitaanka Suuqa | Martech Zone
Doodda ka dhanka ah Taariikhda iyo soo gelitaanka dadka
Jimce, Maarso 26, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Erik Deckers
Waxaan la lahaa sheeko xiiso leh saaxiibkey, Chad Myers oo ah Suuq geynta 3 Koofiyad, iyagoo ka wada hadlaya sida dhaqaalaheena beeraha iyo kacaankii warshadaha ay noogu horseedeen dhaqankeena casriga ah ee shaqada. Sida oo kale kumbuyuutarradeena kumbuyuutarrada QWERTY (waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo aan fiicnayn oo furayaasha nooca wax lagu qoro aysan ku dhegi karin, laakiin waxaan u adeegsanaa maanta qalab aan waligood dhejin doonin), waxaan u adeegsaneynaa fikirka ah meel kasta oo laga bilaabo 100 illaa 1,000 sano jir (iyo ka badan) si loo go'aamiyo shaqaalaha iyo go'aamada shaqada. Oo iyagu si bayaan ah uma shaqeeyaan.
Sidee Dhaqaalaha Beeraha u Saameeyaa Caadooyinkeena Shaqada
Markaad eegto Baby Boomers iyo qoysaskooda xiriirka ay la leeyihiin beeraha, 1tii qof ee Mareykan ahba 4 ayaa si uun ugu xirnaa beer, badiyaa beero qoys. Waagaas, iyo xitaa maanta, waxaad ka kacday qorrax dhaca, oo waxaad ka shaqaysay qorrax dhaca. Ma shaqeyn kartid habeenkii, maxaa yeelay beeraha lama shidin, cagaf-cagafyaduna ma lahan laydhadh hore. Adigu waad shaqaysay maalintii, maxaa yeelay aabbayaashood maalintii way shaqeeyeen, sida awowayaashood iyo awowayaashoodba iyaga ka hor samayn jireen. Asal ahaan, ilaa iyo markii aan haysanay beeraha aduunyada, waxaad shaqeysay maalintii oo aad seexatid habeenkii.
Maalmahan, maahan inaan sidaa yeelno. Waxaan leenahay nalalka korontada, waxaan awood u leenahay inaan ka shaqeyno aagagga waqtiga, oo isla markiiba aan kula xiriirno internetka xawaaraha sare leh.
Sidee Kacaankii Warshadaha u Saameeyay Caadooyinkeena Shaqada
Si dhakhso leh ugu soco dabayaaqadii 1800s iyo horaantii 1900s, markii warshaduhu kacdeen oo otomatigu dadka ka keenay beeraha magaalooyinka si ay shaqo uga helaan. Hadda, haddii wax loo baahan yahay in la dhiso, waxaa lagu sameeyay warshad. Sababtoo ah dadku waxay ka yimaadeen beeraha, waxay ahayd inay shaqeeyaan inta udhaxeysa 8 iyo 5 markale.
Laakiin hadda, maxaa yeelay warshadu waxay ahayd hal meel, shaqada waa in lagu qabtaa goobta. Qalabkaagu wuu jiray. Alaabtaadu way jirtay. Waxaad ka mid ahayd nidaamka, haddii aanad jooginna, nidaamka ayaa fashilmay. Waxay ahayd muhiim inaad soo xaadirtay.
Maalmahan, weli waxaa nalooga fadhiyaa inaan soo muuqano. Shaqadayada waxaa lagu qabtaa dhismaha xafiiska. Waxaan u baahanahay inaan si shaqsi ah ula kulano dadka. Waxaan u baahan nahay inaan fariisano beeraheena yar yar, oo aan sii wadno wax soo saarkeena. Waxaad ka mid tahay nidaamka, laakiin waana kan waxa maareeyayaashu aysan weli ogaan nidaamku ma fashilmi doono maadaama aadan ku jirin dhismaha.
Sababta waxaa kamid ah kalsooni daro dhanka maamulayaasha ah. Haddii aysan na daawan karin, ma ogaan karaan haddii aan shaqo qabanayno. Waxay aaminsan yihiin inaan waqti badan ku qaadanno baashaal intii aan shaqada qaban lahayn. Marna ha u maleynin inay taas sheegi karaan, marka dadku aysan la kulmin waqtiyada loo qabtay oo wax soo saarkoodu kor ama hoos u dhacayo, xitaa marka dadku ku sugan yihiin dhismaha. Laakiin sababo jira awgood, maareeyayaashu waxay u maleynayaan inay dadku u baahan yihiin inay markasta goobjoog ahaadaan, ama haddii kale waxba lama qaban doono.
Dhibaatada Qarniga 21aad oo uu Sababay Fikirka Qarnigii 19aad
Shirkadaha iyo hay'adaha badankood wali waxay kafekerayaan qarnigii 19aad markay tahay waqtiyada shaqada ee la aqbali karo. Adiga waa in joog xafiiska 8:00 am ilaa 5:00 pm. Looma oggola inaad ka shaqeysid guriga, waxaana hubaal ah inaan lagu oggoleyn inaad shaqeyso 9:00 - 6:00, ama Allaylehe! 10: 00 - 7: 00.
Dhowr sano ka hor, markii aan u shaqeynayay Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Indiana, Qayb ahaan waxaan mas'uul ka ahaa qorshaha deg degga ah ee aan adeegsan doonno haddii hargabka hargabku waligiis ku dhufto Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, in badan oo ka mid ah waxay ku xirnayd dadka awood u leh inay ka shaqeeyaan guryahooda. Qof kastaa wuu jeclaa qorshaha oo wuxuu yidhi waa sax wixii aan u baahnayn.
"Weyn," waxaan idhi. Waa inaan dhaqan galino dhowr jeer, oo aan hubinaa in qof kastaa isticmaali karo. Taasi waxay u oggolaan doontaa shaqaalaha lagama maarmaanka u ah inay ka shaqeeyaan waxyaabaha yaryar, inay hubiyaan inay ka heli karaan helitaanka khadka tooska ah, iyo in dhammaan tiknoolajiyadeennu ay shaqeeyaan. Habkaas, markii aan tallaabo qaadno, dhammaanteen uma waceyno waaxda IT-ga maalinta ugu horreysa. ”
“Maya, ma dooneyno inaan sidaa yeelno,” ayaa lagu jawaabay. Waxaan dooneynaa in qof walba uu halkaan ka shaqeeyo. Ma sameyno wada-hadal. ”
Taasi waxay ahayd. Dhamaadka dooda. Ma sameyno wada shaqeyn. Waaxda ugu weyn ee dowladda gobolka, waaxda qaabilsan mas'uulka ka ah wax ka qabashada hargabka ee hargabka, mana aanan sameyn "cunno cunnadeenna eyga. ” Marka, imtixaan la'aan, sidaas awgeed waxay curyaamineysaa dhammaan jawaabihii hay'adda markii waqtigu soo baxay.
* taahid *
Xalka Qarniga 21aad
Anigu kama badbaadi karo fekerka noocan ah sidoo kale. Anigoo ah milkiile ganacsi, ma aanan helin jadwal shaqo oo caadi ah muddo sanad ah. Waxaan soo galaa xafiiska goor dambe, maxaa yeelay waxaan soo daahayaa, badiyaa saacadu markay tahay 2:00.
Laakiin weli waxaan dareemayaa dambi markii qaylo-dhaanta ay soo baxdo 8:00, oo waxaan u maleynayaa, "Waa inaan joogaa xafiiska," xitaa marka jirkeygu uu iigu hanjabayo inuu igu qasbayo kooma hurdo la'aan ah.
Haddana, shaqadayda inteeda badan waxaan qabtaa fiidkii iyo habeenkii. Waxaan u kaxeeyaa oo ka imanayaa xafiiska saacadaha aan shaqada ku jirin, taas oo macnaheedu yahay inaan isticmaalo gaas ka yar. Waqtigeyga ayaan qaataa ka soo dukaamaysiga dukaamada kafeega ama maqaaxiyo yar yar. Immisa shidaal ah ayaan keydin karnaa sanad walba haddii shaqaaluhu ay jaangooyaan jadwalkooda xafiiska si ay ula jaan qaadaan jadwalkooda shaqo ee ugu fiican?
Haddii shirkaduhu ka bixi karaan qaabkan fekerka "kuma aamini karno", oo ay heli karaan habab cusub oo loogu oggolaado shaqaaluhu inay ka shaqeeyaan guriga, waxaan yarayn karnaa shidaalkeenna. Waan yareyn karnaa kharashyada korantada, iyo xitaa guryaha iyo kharashaadka kirada, haddii aan leenahay raadka shirkad yar. Qiyaas inaad isticmaasho dhisme toban meelood meel ka mid ah cabirkiisii ​​asalka ahaa, oo aan ka buuxin wax aan ka ahayn qolalka shirarka, qolalka shirarka, iyo qaar ka mid ah meelihii loogu talagalay dadka u baahan inay waqti ku qaataan xafiiska ka hor ama ka dib kulanka.
Haddii shirkadaha iyo wakaaladaha dawladu ay ku soo biiraan qarniga 21aad, waxaan samayn karnaa waxyaabo yaab leh. Ilaa iyo intaan ka gaadhno, waxaynu fagaaraheenna u jeedin doonnaa khadadka shirarka, fardahana waan xidhi doonaa oo waan falan doonnaa beeraha.
Tags: socdaalkaganacsadahasaacadaha xafiiskasaacadaha shaqadaka shaqeynta guriga
Erik waa VP ee Hawlgallada & Adeegyada Hal-abuurka loogu talagalay Adeegga Blog xirfadeed. Wuxuu wax ku qorayay baloog in ka badan sagaal sano (xitaa ka hor intaan loogu yeerin baloog-garaynta), wuxuuna ahaa qoraa la daabacay in ka badan 20 sano. Isagu waa qoraa kaftan wargeys, wuxuuna qoray maqaallo ganacsi oo dhowr ah, riwaayado masraxyo ah, riwaayado raadiye, wuxuuna hadda ka shaqeynayaa sheeko-sheeko. Wuxuu ka caawiyay qorista Suuqgeynta Twitter ee Dummies, wuxuuna had iyo jeer ka hadlaa blogga iyo warbaahinta bulshada.
Awoodda ALT iyo TAB
Sidee baan u koriyey Hullabaloo! aka Qiyaano…
Mar 27, 2010 at 11: 03 AM
Qoraal cabsi leh, Erik. Waxaan ku dari lahaa waxaan aaminsanahay in dhibaatada badankeed ay ka dhalatay faham la'aanta dalkan ee ah "Waa maxay hogaanku". Inta badan hogaamiyaasha aan khibrada laheyn ee aan la kulmo waxay aaminsan yihiin inay shaqadooda tahay inay 'saxaan' dadka iyo howlaha. Natiija ahaan, waxay diiradda saaraan diidmada… astaamaha xun ee shaqaalahooda, arrimaha taban ee alaabtooda iyo adeegyadooda, arrimaha xun ee ganacsigooda.
Marwalba waxaa jiri doona wax 'lagu saxo' qof kasta iyo ganacsi kasta. Taasi maaha shaqada hoggaamiye. Hogaamiyaha waa inuu ka fakaraa sida loo soo bandhigo hibada shaqaalahooda, sida looga faa’iideysto awooda wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, iyo sida looga faa’iideysto waxyaabaha cajiibka ah ee ganacsigooda uu sameynayo si uu u koro.
Nasiib darrose, waxaan dadka ku dhiirrigelinnaa heerkooda karti-darro. Ma siinayno maareeyayaashayada ama kormeerayaasheena wax tababar ah oo ku saabsan sida loo maareeyo dadka si wax ku ool ah. Waa wax aad u xun!
Mar 29, 2010 at 8: 09 PM
Waxay u egtahay inaad rabto inaad ka shaqeyso ROWE 🙂